သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဘာကြောင့် CMS ကိုအသုံးမပြုထားတာလဲ။ | Martech Zone
သင်၏ကုမ္ပဏီသည်ဘာကြောင့် CMS ကိုအသုံးမပြုခဲ့တာလဲ။
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 17, 2009 စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 24, 2020 Douglas Karr
ဤဘလော့တွင်ပိုမိုကောင်းမွန်သောပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ၀ င်ရောက်ရှာဖွေခြင်း၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများစွာရှိသည် multivariate စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ဆင်းသက်စာမျက်နှာ optimization။ တစ်ခါတစ်ရံဆိုဒ်များသည် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ၌တည်ရှိနေပြီးဆာဗာတွင်မပြောင်းလဲသော hard-coded HTML စာမျက်နှာများဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေ့တတ်ကြသည်။
ငါ FTP မှတဆင့် logged file ကူးယူနှင့် Dreamweaver ကနေတဆင့်လိုအပ်သောတည်းဖြတ်မှုများလုပ်လေ၏။ အဲဒီနောက်ကျွန်တော်သူတို့ကိုသူတို့ကိုပို့ချလိုက်တယ်၊ ဒီအလုပ်တွေအားလုံးဟာတကယ်ကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုတာပဲ။ နောက်ထပ်မကြာသေးမီကဖောက်သည်တစ် ဦး သည်သူတို့၏စျေးကွက်ကို HTML လေ့ကျင့်ရေးသို့စေလွှတ်ခဲ့ပြီးသူတို့၏ site ကို update လုပ်ရန် ၎င်းသည်မလိုအပ်သောအရာလည်းဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်နည်းပညာများနှင့်ဆိုင်သောဗဟုသုတများသည်အထောက်အကူပြုသော်လည်းကောင်းမွန်သောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုပညာရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှား။ သင်၏ site ကိုနေ့စဉ်မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်သင့်ကုမ္ပဏီအားထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ထိုကဲ့သို့သောဖောက်သည်တစ် ဦး အဘို့, စက္ကူ - Lite ကိုတစ် စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ပံ့ပိုးပေးWordPress ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် စျေးကွက်တွင်အခြားတတ်နိုင်သောအကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်ဤတစ်ခုတွင်ခေါင်းလောင်းများနှင့်ဆူညံသံများရှိပြီးဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အလွယ်တကူပြောင်းလဲနိုင်သည်။
အခမဲ့ CMS တပ်ဆင်ခြင်းသည်အခမဲ့မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်မြှင့်တင်မှုများသည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ အခမဲ့ CMS ပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွင်ယောက်ျားလေးကြီးဖြစ်ခြင်းသည်ရာဇ ၀ တ်သားများကိုပိုမိုကြိုးပမ်းစေသည် မင်းရဲ့ platform ကို hack ပါ။ စျေးပေါသော hosting platform ပေါ်တွင်တည်ရှိသော free CMS သည်သင့်အားလိုအပ်သည့် traffic များစွာကိုခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ သင်၏အခြေခံအဆောက်အအုံကိုမြှင့်တင်ပါ.
သင်၏ CMS ကိုကျန်းမာအောင်ထိန်းသိမ်းရန်သင့်တော်သောလူတစ်ယောက်ရှိလျှင်အကျိုးကျေးဇူးများသည်အန္တရာယ်များကိုကျော်လွန်သည်။ CMS ကိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အတူ:
ကျနော်တို့အချို့ back-end ကိုပြု၏ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအတွက် optimization လက်ျာ plugins များနှင့်ဆောင်ပုဒ် format နဲ့အတူ။
We login စာမျက်နှာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်သည် ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်များနိုင်ဘူး ကန့်သတ်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ပါ.
ကျနော်တို့က configured နှင့်ညှိ ဖောက်သည်ကိုးကားလှည့်ဖို့ plugin ကို quote ပင်မစာမျက်နှာ footer ပေါ်မှာ။
ကျနော်တို့ကဝယ်ယူတပ်ဆင်ခဲ့သည် ကြံ့ခိုင်ပုံစံဖြေရှင်းချက် ဒါကြောင့်သူတို့ဖမ်းယူနိုင်ဘူး အထွက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဆောင်.
ကျွန်ုပ်တို့သည်လင့်ခ်အဟောင်းများအားအကြောင်းအရာတူတစ်ခုသို့လမ်းကြောင်းအသစ်များသို့လမ်းကြောင်းလွှဲရန် htaccess ဖိုင်တစ်ခုကိုအဆင့်မြှင့်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်လည်းတစ် ဦး ကို install လုပ်ခဲ့တယ် redirection plugin ကို အပိုဆောင်း redirect လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏသတိမမူတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ် ၀ က်ဘ်ဒီဇိုင်နာများကသင်၏အကောင်းဆုံးကိုသတ်ပစ်နိုင်သည်။ သင်၏အဟောင်းများကိုလင့်ခ်များအလုပ်လုပ်နေစေရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အကြောင်းအရာအသစ်ကိုသာပြပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုက်များကိုကောင်းမွန်စွာပြန်ဆိုနိုင်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် themes များနှင့် plugins များကိုတပ်ဆင်ထားသည် iPhone, iPod touch နှင့်အခြားမိုဘိုင်းပစ္စည်းများ။ လူများသည်မိုဘိုင်းကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ ဆိုဒ်များကိုပိုမိုကြည့်ရှုရန်အသုံးပြုနေသည်။ သင်၏ဆိုဒ်သည်ဤစက်ပစ္စည်းများပေါ်တွင်ဖတ်လို့ရလား။
ကျနော်တို့ configured breadcrumbs နှင့် ဖောက်သည်များပိုမိုလွယ်ကူစွာသွားလာနိုင်ရန်အတွက်နက်ရှိုင်းသောလမ်းညွှန်မှုရှိသောကွန်ရက်စာမျက်နှာ၏ကဏ္sectionsများအပေါ်တွင်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းရဲ့အသွားအလာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်အောင် Webmasters, Stats plugins နှင့် Analytics တို့ကိုပါ configure လုပ်ထားပါတယ်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကုမ္ပဏီအားပလက်ဖောင်းအသစ်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်ထိရောက်စွာအသုံးချနိုင်အောင်ဆက်လက်ကူညီပေးနေသည်။ WordPress ကဲ့သို့သော CMS များသည်အစတွင်အနည်းငယ်စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းနိုင်သည်။ FTP နဲ့ HTML ကိုရှင်းပြတာထက်ပိုလွယ်တယ်ဆိုတာကိုငါသေချာအောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ WordPress သည်ထိုက်တန်သောဘလော့ဂ်ပလက်ဖောင်းဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၏ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြောင့်ငါရိုးသားစွာယုံကြည်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကဲ့သို့သောဝန်ဆောင်မှုဖြေရှင်းနည်းများရှိသည် ဈေး site ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၊
Alterian သည် Social Media Marketing ကောင်စီကိုတည်ထောင်သည်
21:2009 pm မှာအောက်တိုဘာ 12, 42
Doug က ကောင်းကောင်းပြောတာ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ်တုန်းက လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အများကြီးနဲ့ အလားတူ အတွေ့အကြုံတွေ ရခဲ့ဖူးပေမယ့် ဒါကလည်း မှန်ပါတယ်။
" WordPress ကဲ့သို့ CMS သည် အစပိုင်းတွင် အနည်းငယ် ချောက်ချားစရာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။"
အထူးသဖြင့် အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသည် CMS ကို အလွန်အလုပ်များသည်။ သင့်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရင်း အလုပ်များနေပြီး အသစ်အဆန်းများကို အချိန်မရွေး ပို့စ်တင်မည်ဆိုပါက မှတ်သားရန် အလွန်များပါသည်။ သင် CMS ကို ပြန်သုံးဖို့ ပြန်လာတဲ့အခါ၊ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုတာ မေ့သွားပါပြီ။ လက်စွဲစာအုပ်ကို ဘယ်သူဖတ်ချင်လဲ။
WordPress သည် ယေဘူယျ စီမံခန့်ခွဲသူ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းအရ Joomla သို့မဟုတ် Drupal ထက် များစွာသာလွန်သည်မှာ သေချာပါသည်။ အလုပ်အသွားအလာသည် အခြားနှစ်ခုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်သည်။
အသေးစားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက် CMS နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အတွေ့အကြုံကဘာလဲ။ "ရိုးရှင်းသော" အခြားရွေးချယ်စရာများကို သင်ကြိုးစားဖူးပါသလား။